Tobanka Jaamacadood ee ugu Wanaagsan Mareykanka si ay u Baraan 2022
December 6, 2017 SAN
Tobanka Jaamacadood ee ugu Fiican Mareykanka Si Wax Loo Barto
Hoos waxaa ku qoran liiska tobanka jaamacadood ee ugu fiican Maraykanka inaad awoodo inaad iska bixisid markaad codsaneysid inaad wax ka barato Mareykanka.
Mareykanku waa mid ka mid ah waddamada lagu ixtiraamo tayada waxbarashada iyo dadka ka kala yimid meelo badan oo adduunka ah oo muddo dheer doonaya inay wax ku bartaan mid ka mid ah arrimaha Mareykanka. Waxay noqon laheyd muhiimad weyn in la xuso ugu yaraan tobanka jaamacadood ee ugu fiican Mareykanka si loo gaaro go'aano sax ah.
Massachusetts Institute of Technology waa mid ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu fiican Maraykanka waxayna ku taalaa Cambridge, Massachusetts.
Waxaa aasaasay William Barton Rogers iyo sida a jaamacad cilmi baaris gaar ah gudaha Cambridge, Massachusetts, waxay haysaa hadafka lagu hormarinayo aqoonta laguna barayo ardayda sayniska, tikniyoolajiyadda iyo dhinacyada kale ee deeqaha waxbarasho ee sida ugu fiican ugu adeegi doona qaranka iyo adduunka qarniga 21-aad.
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: 49,580 USD (at 2017)
Phone: + 1 617-253-1000
LA XIDHIIDH BADAN: SIDEE AYAAD KU HELI KARTAA VISA DIBADA
Stanford University waxaa sidoo kale loo diiwaangeliyey inay tahay mid ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu wanaagsan Mareykanka, iyadoo ah mid ka mid ah hay'adaha adduunka ugu horreeya ee waxbarista iyo cilmi baarista, waxay u heellan tahay xal u helidda caqabadaha waaweyn iyo u diyaarinta ardayda hoggaanka adduunka isku murugsan.
Barnaamijkeeda shahaadada koowaad waxaa loo diiwaangaliyay inuu yahay kan ugu xulashada badan dalka Mareykanka. Waxay u taagan tahay jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo ku taal Stanford, California.
Iskuulka waxaa loo diiwaangeliyey inuu haysto billadaha labaad ee ugu-badan ee Olombikada jaamacadaha Mareykanka, qiyaastii 270 billadood guud.
Aasaasayaasha: Leland Stanford, Jane Stanford
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: 48,987 USD (ee 2017)
Cinwaanka: 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305, USA
LA XIDHIIDH BADAN: WADAMADA YURUB EE UGU FUDUD IN AAD WAX KA BARATO
Maaha wax lala yaabo in la helo Harvard University liiska tobanka ugu sareeya jaamacadaha ugu wanaagsan Mareykanka maadaama ay ka mid tahay jaamacadaha ugu caansan adduunka.
Jaamacadda Harvard waxay u heellan tahay heer sare xagga baridda, barashada, iyo cilmi-baarista, iyo horumarinta hoggaamiyeyaasha farsamooyin badan oo isbeddel ku sameeya adduunka.
Jaamacadda Harvard waxay caan ku tahay fursadaha badan ee deeqaha waxbarasho ee ay siiso ardayda caalamiga ah iyo qiimaha ay ku leedahay ardaydeeda. Waxay sidoo kale leedahay khidmad waxbarasho oo ka hooseysa marka lala barbardhigo jaamacadaha kale ee ugu sarreeya Mareykanka.
Waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay Ivy League oo ku taal Cambridge, Massachusetts, oo lagu aasaasay 1636
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: 43,280 USD (ee 2016)
Phone: + 1 617-495-1000
LA XIDHIIDH BADAN: SIDEE LOOGU HELAA SCHOLARSHIP BILAASH AH SI AAD UGU BARATO DUGSIYADA SARE
At Caltech, cilmi baarayaashu waxay bilaabeen goobo cusub oo daah-fur ah, waxay ku hormariyeen cilmi baarista aasaasiga ah dalabkooda, iyo farsamooyinka naqshadeynta ee waxtar u leh aadanaha.
Machadka Teknoolajiyadda California waa jaamacad si gaar ah u bixisa dhaqtarka oo ku taal Pasadena, California, Mareykanka. Machadka Teknolojiyada ee California shaki la'aan waa mid ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu fiican Mareykanka maadaama ay tahay machadyo ka dhex muuqda ceeryaamo kuwa kale xagga waxbarashada iyo guud ahaan tacliinta.
Machadka Teknolojiyada ee California wuxuu soo saaray shakhsiyaad caan ah sida Kip Thorne, Qian Xuesen, Adam D'Angelo, Frances Arnold, Linus Pauling iyo kuwa kale.
Haddii aad ka fekereyso hay'ad Mareykan ah si aad u sii wadato barashada yuour, markaa Machadka Teknolojiyadda ee California waa inuu noqdaa mid ka mid ah xulashooyinka ay tahay inaad eegto.
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: 48,111 USD (ee 2017)
Phone: + 1 626-395-6811
LA XIDHIIDH BADAN: SIDEE LOOGA BARAN KARAA DALKA SIYAASAD AQOONSAN
Jaamacadda Chicago waa mid gaar loo leeyahay, oo aan la wadaagin, dhaqan ahaan hodan ku ah iyo jaamacad cilmi-baaris wada-jir ah oo kala duwan oo ku taal Hyde Park, Chicago. Jaamacadda Chicago waa jaamacad aan u kala soocin diin iyo dhaqan midna, waa iskuul sare u qaada xiriirka ka dhexeeya dhaqamada kala duwan iyadoo la dejinayo ardayda dhammaan diimaha.
Jaamacadda Chicago waa jaamacad cilmi baaris ah oo leh kala duwanaansho ku dadaalaysa inay noqoto tan ugu fiican waxa ay yihiin. Waxaa la aasaasay 1890 waxayna hadda haysaa tobanka boos ee ugu sareeya qiimeynno kala duwan oo heer qaran iyo caalami ah oo qiil u siinaya khibradooda tacliinta.
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: 50,997 USD (ee 2016)
Phone: + 1 773-702-1234
Iyada oo loo marayo waxbarid iyo cilmi baaris, Jaamacadda Princeton waxay wax ku baraysaa dadka wax ku soo kordhin doona bulshada iyo horumarinta aqoonta wax ka beddeli doonta adduunka. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu wanaagsan Mareykanka, Jaamacadda Princeton waa jaamacad gaar loo leeyahay oo Ivy League ah oo ku taal Princeton, New Jersey, Mareykanka oo isbeddel ka sameyneysa waxa ay qabato. Waxay leedahay horyaallada siddeedaad ee ugu xulalka badan xulalka ee ka dhex jira iskuulada NCAA wadar ahaan koobab kooxeed (68) sida laga soo xigtay wikipedia.org.
Jaamacadda Princeton ayaa weli ah mid ka mid ah jaamacadaha la tixgelin doono markii la dooranayo jaamacad wanaagsan oo lagu barto Mareykanka.
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: 47,500 USD (ee 2017)
Phone: + 1 609-258-3000
Jaamacadda Cornell waa jaamacad cilmi baaris gaar loo leeyahay oo bixisa waxbarasho gaar ah oo loogu talagalay ardayda qalin jabisa iyo kuwa qalin jabiya iyo kuwa xirfadda leh. Kulliyadaha iyo iskuulada Cornell waxay ka koobanyihiin in kabadan 100 goobood oo wax lagu barto, xarumoodna kuyaal Ithaca, New York, New York City iyo Doha, Qatar.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu wanaagsan Mareykanka, Jaamacadda Cornell waa jaamacad cilmi baaris gaar loo leeyahay oo Ivy League ah oo soo saartay astaamo badan sida Bill Nye, Ann Coulter, iyo kuwo kale.
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: Waxbarashada maxalliga ah: 33,968 USD (at 2016), Waxbarashada gudaha: 50,712 USD (at 2016)
Jaamacada Yale waxaa loogu tala galay fidinta iyo wadaagida aqoonta, dhiirigelinta hal-abuurnimada, iyo ilaalinta macluumaadka dhaqanka iyo sayniska ee jiilalka soo socda.
Jaamacadda Yale oo ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu fiican Mareykanka waxay ku dadaalaysaa inay ilaaliso hoggaankeeda dhiirigelinta hal-abuurnimada iyo soo saarista aqoonyahanno heer sare ah.
Jaamacadda Yale waa jaamacad cilmi baaris ah oo Mareykan ah oo Ivy League ah oo ku taal New Haven, Connecticut. Waxaa la aasaasay 1701, waa hay'adda saddexaad ee ugu da'da weyn tacliinta sare ee Mareykanka sidaa darteedna waa tan khibrad leh ee khibradda u leh nidaamka waxbarashada Mareykanka.
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: 49,480 USD (at 2016)
Phone: + 1 203-432-4771
Jaamacadda Johns Hopkins waa jaamacad cilmi baaris oo Mareykan ah oo gaar loo leeyahay oo ku taal Baltimore, Maryland. Waxaa la aasaasay 1876, jaamacadda waxaa loo magacaabay deeq bixiyaheeda ugu horreeyay, ganacsadaha Mareykanka, baabi'inta, iyo samafalaha Johns Hopkins.
Johns Hopkins waxaa lagu aasaasay mabda'a ah in la raaco fikradaha waaweyn lana wadaago waxa aan baranno, waxaan ka dhigeynaa adduunka meel wanaagsan.
Jaamacadda Johns Hopkins waxay ku leedahay booskeeda liiska tobanka jaamacadood ee ugu fiican Maraykanka waxayna ka ciyaaraan kaalin mudan in lagu tababaro maskaxda dhalinyarada.
Waxbarashada iyo shahaadada jaamacadeed: Waxbarashada maxalliga ah: 49,249 USD (at 2017), Waxbarashada gudaha: 52,170 USD (at 2017)
Phone: + 1 410-516-8000
Jaamacadda Columbia, oo la aasaasay 1754, waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Ivy League oo ku taal Upper Manhattan, Magaalada New York -Wikipedia.
Jaamacadda Columbia waa mid ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu fiican Mareykanka, waxaad ka heli kartaa macluumaadka gelitaanka ee ku saabsan Jaamacadda Columbia Halkan.
Waxaan rajeynayaa in liistadani ay kaa caawin doonto inaad go'aan ka gaarto mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan Mareykanka ee iskuulka dhigta ama dhigta qaybtaada.
Weli waad nala joogi kartaa si aad u iibsato fursado waxbarasho waxaan u dirnaa ardayda inay wax ka bartaan jaamacadaha ugu fiican Maraykanka lacag la'aan. Waxaan sidoo kale soo dirnaa hageyaal ka caawiya ardayda inay galaan jaamacad kasta oo ay doortaan iyo tilmaamo ka caawiya inay ku guuleystaan ​​jaamacadaha iyo kulliyadaha sidoo kale si guul leh.
Machadka Teknoolajiyadda CaliforniaColumbia UniversityCornell UniversityHarvard UniversityJaamacadda Johns HopkinsMassachusetts Institute of TechnologyPrinceton UniversityStanford UniversityU ARAGTAA WAXQABADKAdaraasad ku sameeya usawaxbarasho dibedda ahtobanka jaamacadood ee ugu fiicantobanka jaamacadood ee ugu fiican MaraykankaJAAMACADAHA MareykankaUniversity of ChicagoJaamacada Yale
Previous Post:Sida Si Fudud Loogu Helo Daraasadda Kanada ee Dibadda VISA, Baasaboor iyo Oggolaansho Degenaansho
Post Next:Jaamacadaha Ugu Fiican Ee Lagu Barto Ingiriiska Ingiriiska
adinda wuxuu leeyahay,
September 5, 2021 at 3: am 52